Andiana abidy karaibiàna mitokelaka amin’ny TikTok · Global Voices teny Malagasy
'C' dia fanafohezana ny "comedy" (hatsikana)
Voadika ny 20 Oktobra 2020 12:55 GMT
@wellonyc sy @stephon23, mpampiasa TikTok izay samy nanao dika iray avy tamin'ilay andiany “Abidin'ny Anio”. Pikantsary nalaina tao amin'ny fahana TikTok-ndry zareo.
Ny vahoaka karaibiàna dia fantatra tsara amin'ny fampiasàna vazivazy ho toy ny fitaovana iray hanehoana hevitra sôsialy sy hiatrehana ireo olana goavana.
Tao anivon'ny valanaretina COVID-19, miaraka amin'ireo faritra maro nametrahana fepetra henjana — isan'izany ny fandraràna ny famoriana vahoaka — ny tokiky no lasa fomba iray niatrehana izany, natosik'ireo tolotry ny fampiasa mahatsikaiky toy ny TikTok.
Olona iray mpampiasa TikTok avy any Goiàna, i @wellonyc no solonanarana entiny no nanomboka nandefa andiana lahatsary fohy — endri-piainana “Sesame Street “ — izay nanasongadina “Abidin'ny Anio” iray. Ity fintana ity, mazava loatra, dia hoe ireo teny asongadiny dia samy ampahany avy amina tenimparitra ao Goiàna avokoa (ary indraindray mivelatra be hatrany Antilles).
Mampihetsi-po ny fitanisàna ny maripanononana sasany amin'ireo teny, amin'ny fomba fanononana avy any amin'ny faritra, raha ireo fototra niaingany — toy ity iray ho an'ny teny rukshun [ruction] ity — izay manome sosom-pihomehezana fanampiny:
Pikantsarin'ny TikTok nataon'i @wellonyc ho an'ny lahatsary “Abidin'ny Anio”, “R dia natao ho an'ny Rukshun”.
Ny asa vitany dia aingampanahy ho ana artista iray hafa ety anaty aterineto, izay niteraka fihomehezana be sy fifantohantsaina tety anaty media sôsialy ihany koa ny ezaka nataony. Nantsoin'i Stephon Felmine hoe “Trini Alphabet Series” ny dika nataony tamin'ireo andiana lahatsary : ireo teny avy amin'ny fitenimparitra ao Trinidad & Tobago no asongadiny, manome famaritana, ary mampiseho ohatra maro amin'ny fampiasàna fehezanteny misy sarinteny mahatsikaiky, ary mahatonga ho vao mainka mampihomehy kokoa ny fomba fanehoana matotra ataony, mampahatsiahy tale hentitra iray :
Pikantsary avy amin'ny andiany “Abidin'ny Anio”, dika nomen'ilay mpampiasa TikTok Stephon Felmine.
Kanefa, toa nisy ireo mpankafy ireo andiany roa ireo no niresaka ihany koa momba ny fitompoana ilay asa. Ny 29 Septambra, nandefa sata azon'ny daholobe jerena tao amin'ny pejiny Facebook i Felmine:
Ho anareo izay milaza fa tsy nomeko voninahitra momba ny ANDIANA ABIDY ilay teratany avy ao Goiàna mpampiasa TikTok @wellonyc , lainga izany! Raha iverenanareo ny litera voalohany nataoko, “A”, nomeko voninahitra ary notanisaiko izy. Nialoha an'io aza dia nandefa hafatra ho azy aho tao amin'ny TikTok ary nilaza taminy fa nihevitra ny hanao dika vita avy aty Trini. Tsy namaly velively izy saingy notohizako ny fahazotoako. Tsy tokony hibahan-toerana ny olana kivalavala tahaka itony, indrindra rehefa misy olana goavana maika kokoa eo anoloantsika. Ny fanafody tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ny fihomehezana ary teeeena faly aho hoe afaka manapariaka azy io manerana an'i T&T 🇹🇹. Ndao isika hiroso […]
Na teo aza ny fanomezan'i Felmine voninahitra an'i @wellonyc tao anatin'ilay lahatsorany voalohany, toa mety hitombo ihany ny fihenjanana eo amin'ireo roa mpampiasa TikTok ireo. Ny 5 Oktôbra, @wellonyc — izay manana fandraharahàna anjorony mivarotra entana miainga avy amin'ireo votoaty arosony ao anaty media sôsialy — nandefa ny hoe :
Izaho no niandohan'ity andiany ity! Tsy misy na iza na iza nomeko alàlana na iza na iza hanao dika mitovy aminy. Makà aingampanahy saingy aoka tsy hàka tàhaka.
Momba ny olana atrehana rehefa fizakàmanana ara-tsaina sy media sôsialy no resahana, niresaka tamin'ny alàlan'ny Facebook tamin'ny Global Voices i Carla Parris, mpisolovava momba ny doka sy ny fanatanjahantena, mipetraka ao Trinidad, izay mamokatra sy mampiantrano ny andiany YouTube “The Business of Carnival,” :
Tena olana iray mahaliana izy ity, ary iray izay azo antoka fa hitohy ho lasa manandanja satria miha-mitombo hatrany eny anaty fiarahamonina karaibiàna ny anjara toerana raisin'ireo mpanefy hevitra.
Ny fanontaniana eo an-tànana izao [momba ireo lahatsary TikTok] dia ny iray mikasika ny Lalàna momba ny fizakàmanana ara-tsaina ary na misy na tsia antoko iray afaka hilaza fa voahitsakitsaka ny asany. Na marobe aza ny olona no mino hoe miaro ireo hevitra momba ny fizakàmanana ara-tsaina, tsy miaro ny hevitra io, tsy miaro fotokevitra sy dingana. Raha ny marina dia ny fanehoana ny hevitra iray no arovan'io ary ilay hevitra dia tsy maintsy hevitra tokamiavaka avy amin'ilay mpamorona.
Ny fanontaniana tena fototra sy mipetraka dia ny hoe hisy sa tsia antoko hilaza fa namorona voalohany ilay asa ary raha toa ilay asa ka hahatratra ny lenta maha-tokamiavaka azy eo anatrehan'ny lalàna momba ny Zon'ny Mpamorona any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy? Mahaliana ny hanaraka an'ity mba hahitàna izay ho fivoarany.
Raha isintahantsika kely ny resaka fizakàmanana ara-tsaina, samy mitohy mahasarika olona hanaraka azy ireo andiany roa ireo, ary amin'ny ankapopbeny dia samy zaraina amina fantsona marobe, isan'ireny ny Facebook, Instagram sy ny WhatsApp, ary nanomboka teo i Felmine dia hita mipoitra anaty dokambarotra amin'ny fiantsoana azy ho “Abidin'ny Anio”.
Ireo mpijery fahitalavitra ao Karaiba, na ny ao an-toerana na ireo any am-pielezana, dia niady hevitra momba ireo teny daholo (ny sasany izay mbola tsy henon-dry zareo mihitsy hatrizay), tamin'ny fizaràna izay fahatakaran'izy ireo ny dikan'ny fomba fiteny sasantsasany, manosoka hevitra vitsivitsy fanampiny ho an'ireo abidy isankarazany ary midera ny talenta sy ny fahaizamamorona ananan'ireo roa kintan'ny TikTok.
Tsy isalasalàna fa fitaovana iray mampiala voly ireo lahatsary, entina hianarana ireo fomba fiteny karaibiàna mahazatra, hilonanao anatin'ny gadona tokamiavaka sy ny ronjon'ny fitenim-paritra, ary hampitokiky rehefa sendra azy ianareo.